Saboolnimo iyo deeqsinimo, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waraaqdii labaad ee Bawlos uu u qoray Korintos, wuxuu ku bixiyay xisaab aad u wanaagsan oo ku saabsan sida hadiyadda farxadda leh ee farxaddu u saameyso nolosha rumaystayaasha hab wax ku ool ah. "Laakiin waxaan idinku wargalinaynaa, walaalayaalow gacaliyeyow, nimcada Ilaah ee lagu siiyey bulshooyinka Makedoniya" (2 Korintos 8,1). Bawlos kaliya ma uusan sameynin warbixin yar - laakiin wuxuu rabay walaalaha Korintos inay ka jawaabaan nimcada Ilaah si la mid ah kaniisada Tesaloniika. Wuxuu doonayay inuu iyaga siiyo jawaab sax ah oo miro dhal ah oo deeqsinimada Eebbe. Bawlos wuxuu xusayaa in reer Makedoniya ay “aad u dhibaataysan yihiin” iyo “aad u liitaa” - laakiin sidoo kale waxay leeyihiin “farxad aad u wanaagsan” (V. 2). Farxaddeeda kama imaan xagga injiilka caafimaadka iyo barwaaqada. Farxadooda weyn kama imaanin lacag iyo alaab fara badan, laakiin in kasta oo ay haysteen in yar oo ay lahaayeen!
Falcelinteedu waxay muujineysaa wax "ka yimid adduunka kale", wax ka sarreeya, wax gabi ahaanba ka baxsan dunida dabiiciga ah ee aadanaha, waana wax aan lagu sharixi karin qiimayaasha adduunkan: "Sababtoo ah farxaddeeda waxay ahayd mid farxad leh markii ay isku muujisay dhibaato badan. iyo, in kasta oo ay aad u liitaan, hadana wax badan bay ku bixiyeen fudud kasta » (V. 2). Waa wax lala yaabo! Isku dar saboolnimada iyo farxadda maxaad helaysaa? Bixin badan! Tani maahan boqolkiiba-siinteeda. "Sababtoo ah sida ugu adag ee aan u markhaati kici karo, waxayna xitaa raalli ka noqdeen awooddooda" (V. 3). Waxay siiyeen wax ka badan wixii "macquul ahaa". Waxay bixiyeen allabari. Hagaag, sidii haddii taasi aysan ku filnayn, "waxaan weydiisanay qancin badan si ay uga caawin karaan barakada iyo wadajirka u adeegida quduusiinta." (V. 4). Saboolnimadooda darteed, waxay weyddiiseen Paul fursad uu ku siiyo wax ka badan inta macquulka ah!
Taasi waa sida nimcada Ilaah uga shaqaysay rumaystayaasha Makedoniya. Waxay markhaati u ahayd sida ay u aaminsan yihiin Ciise Masiix. Waxay ahayd marag ka ah jacaylkooda ruuxiga ah ee ay awooddooda u muujiyeen dadka kale - taas oo ah marag fur uu Bawlos doonayo inuu Korintos ku garto oo uu ku daydo. Oo sidoo kale waa wax annaga maanta ah haddii aan u oggolaan karno Ruuxa Quduuska ah inuu si xor ah uga dhex shaqeeyo.
Marka hore Rabbiga
Muxuu reer Makedoniya wax uga qabtay “dunidan”? Bawlos wuxuu yidhi: "... laakiin waxay naftooda u bixiyeen, ugu horreeyaan Rabbiga, ka dibna annagana, sida ay tahay doonista Ilaah" (V. 5). Waxay ku sameeyeen iyagoo u adeegi jiray Rabbiga. Allabari ahaantoodii waxay ugu horreeyeen Rabbiga. Waxay ahayd shaqo nimco leh, oo ka mid ahayd shaqada Ilaah ee noloshooda oo waxay ogaadeen inay ku faraxsan yihiin inay sidaas sameeyaan. Iyagoo ka jawaabaya Ruuxa Quduuska ah ee ku dhex jira, waxay garteen, rumaysteen oo u dhaqmeen sidan, maxaa yeelay nolosha laguma cabiro waxa badan ee maaddada ahi.
Haddaan cutubkan ka akhrinno, waxaynu arki karnaa inuu Bawlos doonayay in uu sidan oo kale sameeyo: «Sidaas darteed waxaannu Titos ugu dhaadhicinnay inuu sidii horeba isagu abaalgudkan idiinku sii samaynayo; Laakiin sidaad hodan u tahay dhammaan qaybaha kala duwan, xagga rumaysadka, iyo hadalka, iyo aqoonta, iyo dadaalka oo dhan iyo jacaylka aan idinka dhex kicinay, wax badan ha ku siiyo waxtarkaas (Aayadaha 6aad).
Korintos wuxuu ku faanayey xoolahooda ruuxiga ah. Wax badan bay bixiyeen, laakiin ma ay bixin! Bawlos wuxuu rabay iyaga inay ku fiicnaadaan deeqsinimada maxaa yeelay taasi waa muujinta jacaylka rabbaaniga ah, iyo jacaylku waa waxa ugu muhiimsan.
Hadana Bawlos wuu ogyahay in waxkasta oo qof bixiyo, waxba uma taraynayso qofka hadii dabeecaddu ka xanaaqdo halkii deeqsinimo (1 Korintos 13,3). Markaa isagu ma doonayo inuu cabsi geliyo dadka reer Korintos, si uu uga xanaajiyo, laakiin wuxuu doonayaa inuu cadaadis yar saaro iyaga sababtoo ah habdhaqanka reer Korintoon waxa uu ka gaabiyey wixii la filayey, waana in loo sheegaa in tani ay ahayd kiiska. «Uma oran taas amar ahaan; laakiin sababta oo ah kuwa kale ayaa aad u xiiseeya, waxaan sidoo kale baadhayaa jacaylkaaga inuu yahay mid hagaagsan » (2 Korintos 8,8).
Wadaaddada dhabta ah lagama helo waxyaabihii ay Korintos ku faani jireen - waxaa lagu cabbiraa heerka ugu wanaagsan ee Ciise Masiix kan naftiisa u bixiyay wax walba. Sidaas darteed Bawlos wuxuu soo bandhigayaa dabeecadda Ciise Masiix daliil fiqi ahaaneed oo deeqsinimo ah oo uu doonayey inuu ku dhex arko kaniisadda Korintos: «Maxaa yeelay waad og tihiin nimcada Rabbigeenna Ciise Masiix; in kastoo uu taajir yahay, aawadaa uu miskiin u noqday, inaad aawadiin u tagtaan saboolnimadiisa hodan buu ka dhigi lahaa »» (V. 9).
Maalka Bawlos ku tilmaamayaa maaha maalqabsi jidh ahaaneed. Qasnadahayagu aad ayey uga weyn yihiin khasnadaha jidheed. Cimriga ayaad ku sugantahay, annaga ayaa naloo hagaajiyey. Laakiin hadda xitaa, haddii aan u oggolaanno Ruuxa Quduuska ahi in uu dhex shaqeeyo, waxaan durba yar uun uga dhadhamin karnaa hodantinimada weligeed ah.
Waqti xaadirkaan, dadka aaminka ah ee Ilaah waxay soo mareen tijaabooyin, xitaa saboolnimo - laakiin, maxaa yeelay Ciise wuxuu inagu dhex nool yahay, waxaan hodan ku noqon karnaa deeqsinimada. Waxaan ku guuleysan karnaa wax bixinta. Waxaan ka gudbi karnaa inta ugu yar sababta oo ah xitaa hadda farxadeena Masiixa way buuxsami kartaa si loo caawiyo kuwa kale.
Wax badan ayaa laga sheegi karaa tusaale ahaan ciise, oo inta badan ka hadlay sida saxda ah ee loo isticmaalo hantida. Qeybtaan Bawlos wuxuu ku soo koobay "faqri". Ciise wuxuu diyaar u ahaa inuu naftiisa faqri ka dhigo anaga aawadeen. Haddii aan isaga raacno, waxaa sidoo kale naloogu yeedhay inaan iska dhiibno waxyaalaha dunidan, inaan ku noolaano si waafaqsan qiyamka kale iyo inaan isaga ugu adeegno adoo u adeegaya dadka kale.
Farxad iyo deeqsinimo
Bawlos wuxuu sii waday cabashadiisii ​​uu u diray Korintos: «Markaan ku idhaahdaa ra'yigayga; maxaa yeelay tani waa mid waxtar kuu leh adiga, kii aad ku bilowdeen sannadkii hore ma aha oo keliya inaad qabatid, laakiin sidoo kale rabitaan. Hadda, si kastaba ha noqotee, sidoo kale samee wixii aad ugu jeceshahay inaad ku dhammaystirto waxa aad haysato » (Aayadaha 10aad).
"Sababtoo ah haddii uu jiro rabitaan wanaagsan" - haddii ay jirto dabeecad deeqsinimo - "waxaa lagu soo dhaweynayaa sida qofku haysto, maahan waxa uusan lahayn" (V. 12). Bawlos kama uusan weydiisan dadka Korintos inay bixiyaan wixii la mid ah kuwii reer Makedoniya ay siiyeen. Reer Makedoniya waxay horey u siiyeen maalkoodii; Bawlos kaliya wuxuu weydiistey dadka Korintos inay bixiyaan wax walba oo ay karaan - laakiin waxa ugu weyn ayaa ah inuu doonayey inuu si deeqsinimo leh u bixiyo si ay u noqoto wax iskaa ah.
Bawlos wuxuu ku sii watay dhawr talo-siin oo ah Cutubka 9aad: "Maxaa yeelay waan ogahay wanaaggaaga, oo aan kugu ammaani doono kuwa Makedoniya ka imanaya, markaan idhaahdo, Akhaya waxay diyaar ahayd sanadkii la soo dhaafay! Tusaalahaagana waxa uu kiciyay inta ugu badan » (V. 2).
Sida Bawlos u adeegsaday tusaalaha Makedoniya si uu u dhiirrigeliyo dadka reer Korintos inay deeqsinimada siiyaan, wuxuu hore u adeegsaday tusaalaha Korintosiga si uu ugu dhiirrigeliyo dadka reer Makedoniya, sida muuqata guul weyn buu ku gaadhay. Dadka reer Makedoniya waxay ahaayeen kuwo deeqsi ah oo Bawlos gartay in dadka reer Korintos ay qaban karaan wax badan intii ay horey usameeyeen. Laakiin wuxuu Makedoniya ku faaniyey in dadka reer Korintos ay deeqsi yihiin. Hadda wuxuu rabay in kuwa reer Korintos ay dhammaystiraan. Wuxuu rabaa inuu mar kale digo. Wuxuu doonayaa inuu cadaadis saarto qaar, laakiin wuxuu doonayaa in dhibbanaha si ikhtiyaari ah loo siiyo.
Laakiin waxaan u diray walaalaha si aan faankayagu idiinku baabbi'in qaybkan, oo aad diyaar u ahaataan sidaan idiin sheegay, mana aha hadday Makedoniya ka yimaadeen oo ay idin arkaan adigoo aan diyaar ahayn. , annagu ma oran karno: adigu waad ku ceeboobi doontaa kalsoonintan. Markaa waxaan hadda u arkaa inay muhiim tahay inaan walaalaha ka waaniyo inay horu mariyaan si loo dhammeeyo barakada aad shaacisay inay diyaar u tahay hadiyad barako ee aan khaldan (Aayadaha 3aad).
Markaas waxaa jira aayad aan marar badan maqalnay. Qof walba, sida uu maanka ku hayo, ma aha qasab ama khasab; maxaa yeelay, Ilaah wuxuu jecel yahay deeq bixiye » (V. 7). Farxaddaas micnaheedu maahan farxad ama qosol - micnaheedu waa inaan ku raaxeysano la wadaagista alaabadayada kuwa kale maxaa yeelay Masiixu waa inagu jiraa. Bixinta waxay naga dhigeysaa inaan fiicno. Jacaylka iyo nimcadu waxay ka shaqeeyaan qalbiyadeenna si noloshu wax siiso si tartiib tartiib ah ayey farxad noogu noqonaysaa.
Qeybtaan Bawlos sidoo kale wuxuu ka hadlayaa abaalmarino. Haddii aan si deeqsinimo iyo deeqsinimo ah u bixinno, ka dib Ilaah baa na siin doona. Bawlos kama baqay inuu xasuusiyo kuwa Korintos ee waxyaalaha soo socda: «Laakiin Ilaah wuxuu hubsan karaa in nimcada oo dhan dhexdiinna ku badatay, si aad had iyo goor wax kasta ugu dhergaan, oo aad haddana hodan ugu ahaato shuqul kasta oo wanaagsan” (V. 8).
Bawlos wuxuu ballan qaadayaa in Ilaahay deeqsinimo noo siin doono. Mararka qaar Ilaah wuxuu na siiyaa agab, laakiin taasi ma aha ujeeddada Bawlos uu ka hadlayo. Wuxuu ka hadlayaa nimcada - ma aha nimcada cafiska (Waxaan ku helnaa nimcadan cajiibka ah rumaysadka Masiixa, ee ma ahan shaqooyinka deeqsinimada) - Bawlos wuxuu ka hadlayaa noocyo kale oo badan oo nimco ah oo Ilaah ku siin karo.
Haddii Ilaah nimco dheeraad ah siiyo kaniisadaha Makedoniya, way heli lahaayeen lacag ka yar kuwii hore - laakiin farxad badan! Qof kastoo caqli gal ah, haddii ay wax dooran lahaayeen, waxay ka doorbidayaan faqiirnimo farxad ka badan taajirnimo la'aan. Farxadu waa barakada weyn, Eebana wuxuu ina siiyaa barako weyn. Masiixiyiinta qaar ayaa xitaa hela labadaba - laakiin sidoo kale waxay leeyihiin mas'uuliyad ah inay labadooduba u adeegaan kuwa kale.
Bawlos haddaba wuxuu ka soo xigtay Axdiga Hore: "Wuxuu faafay oo siiyey masaakiinta" (V. 9). Hadiyado noocee ah ayuu ka hadlayaa? "Xaqnimadiisu weligeed way sii waartaa". Hadiyadda caddaaladdu way ka xoog badan tahay dhammaantood. Hadiyadda ah in lagu arko mid xaq ah ee Ilaah hortiisa lagu arko - kani waa hadiyad weligeed sii jirta.
Eebbe ajar weyn ha siiyo
Laakiin kii beero abuur siiya oo cunto siiya, isagu wuxuu kaloo idin siin doonaa abuur, wuuna tarmin doonaa, wuuna u kori doonaa midhaha xaqnimadaada. (V. 10). Odhaahdani ugu dambeysay ee ku saabsan goosashada caddaaladda waxay ina tuseysaa in Bawlos adeegsaday sawirro. Isagu uma ballanqaado abuur wanaagsan, laakiin wuxuu leeyahay Ilaah baa abaalmariya dadka deeqsi ah. Wuxuu siiyaa inay waxbadan bixin karaan.
Waxbadan ayuu siin doonaa qofka adeegsada hadiyadaha Eebbe si uu ugu adeego. Mararka qaar wuxuu ku soo noqdaa si la mid ah, hadhuudh hadhuudh, lacag lacag, laakiin had iyo goor maahan. Mararka qaar wuxuu noogu duceeya farxad aan la qiyaasi karin markay tahay bixinta sadaqada. Had iyo jeer wuxuu siiyaa waxa ugu fiican.
Bawlos wuxuu sheegay in kuwa reer Korintos ay lahaan doonaan waxkastoo ay u baahan yihiin. Ujeeddadee Sidaa darteed iyagu waa kuwo 'qani ku ah shaqo kasta oo wanaagsan'. Waxa uu isla sidaas ku sheegay aayadda 12aad: "Sababtoo ah adeegga ururintaan ma ahan oo keliya daaweyn la'aanta la'aanta quduusiinnimada, laakiin sidoo kale waxay sidoo kale kadhigaysaa kuwo badan oo Ilaahay u mahadiya." Hadiyadaha Ilaahay waxay la yimaadeen shuruudo, waan dhihi karnaa. Waa inaan isticmaalnaa, ha ku dhex qarin armaajo.
Kuwa taajiriinta ah waa inay hodan ku noqdaan camalka wanaagsan. Waxaad amartaa kuwa taajiriinta ah ee dunidan inayan ku faanin, oo ayan rajo ka gelin hodantinimada aan la hubin, laakiinse Eebbe yaa ina siiya wax kasta oo aan ku raaxaysanno; inay wanaag sameeyaan, oo ay hodan ku noqdaan shuqullada wanaagsan, jecel yihiin inay wax siiyaan, caawiyaan (1 Timoteyos 6,17: 18).
Waa maxay abaalgudka dabeecaddan aan caadiga ahayn, ee loogu talagalay dadka aan ku xidhnayn xoolo sidii wax ay qaban karaan laakiin si iskaa ah uga bixiya? "Sidan ayay u ururiyaan khasnad sabab wanaagsan mustaqbalka si ay nolosha dhabta ah u qaataan" (V. 19). Haddii aan Ilaah aaminno, waxaan qaadaynaa nolosha dhabta ah.
Saaxiibbada, iimaanku nolol fudud ma aha. Axdiga cusubi nama ballanqaado nolol raaxo leh. Waxay ku bixisaa wax aan ka badnayn 1 milyan: 1 faa iido maal gelinteena - laakiin waxay ku dari kartaa qaar ka mid ah dhibanayaal muhiim ah noloshaan ku meel gaarka ah.
Hadana wali waxaa jira abaalmarino waaweyn noloshaan sidookale. Ilaah nimco hodan ah ayuu ku siiyaa jidka (iyo xigmaddiisa aan dhamaadka lahayn) sida uu u ogyahay inay ugu fiican tahay anaga. Imtixaannadeenna iyo ducooyinkeenna, waxaan nafteenna ku aamini karnaa isaga. Wax walba waan u dhiibi karnaa isaga, haddii aan sidaas yeelno, nolosheenu waxay noqon doontaa marag xagga iimaanka.
Ilaah aad buu inoo jecel yahay sidaa darteed wuxuu u soo diray Wiilkiisa si uu inoogu dhinto xitaa annaga oo dambiilayaal ah iyo cadawgayaga. Maaddaama uu Ilaah hore noogu tusay jacaylkaas oo kale, waxaan si kalsooni leh ugu aamini karnaa inuu ina daryeelo, mustaqbalkeenna wanaagsan, hadda oo aan nahay carruurtiisii ​​iyo saaxiibadii. Uma baahnin inaan ka walwalaan sameynta "lacagteena".
Aynu dib ugu noqonno 2 Korintos 9 oo aan aragno wuxuu Bawlos ku barayo Korintos ku saabsan deeqsinimadooda dhaqaale iyo deeqsinimadooda. Sidaasaad wax walba hodan u ahaan doontaa inaad ugu bixisaan wax kasta oo fudud oo ka dhex shaqeeya mahadnaqiddiinna Ilaah. Sababta oo ah adeegga ururintaan ma daaweynayso oo keliya maqnaanshaha quduusiinta, laakiin sidoo kale waxay u horseedaa dad badan oo mahad leh » (Aayadaha 11aad).
Bawlos wuxuu xasuusinayaa dadka reer Korintos in deeqsinimadooda aysan ahayn kaliya dadaal bina-aadamnimo - waxay leedahay natiijooyin fiqi ahaaneed. Dadku Ilaah bay ugu mahadnaqayaan tan maxaa yeelay waxay fahmeen in Eebbe ku dhex shaqeeyo dadka. Eebbe wuxuu saaraa kuwa wax siiya qalbigooda. Sidan ayaa loo sameeyaa shaqada Ilaah. "Adeeggan aaminka ah waxay ku ammaaneen Ilaah addeeciddiinnii Injiilka Masiix iyo fudaydnimada xidhiidhka aad la leedahay iyaga iyo dadka oo dhan" (V. 13). Dhowr qodob ayaa caan ku ah markan. Marka hore, Korintos waa ay awoodeen inay isku caddeeyaan wax qabadkooda. Waxay ku muujiyeen ficilladooda in aaminsanaantooda ay dhab tahay. Marka labaad, deeqsinimadu ma keento oo keliya mahad-naq, laakiin sidoo kale waxaynu ku mahadnaqaa Ilaah. Waa hab lagu caabudo. Saddexaad, aqbalaadda injiilka nimcada waxay sidoo kale u baahan tahay addeecid, iyo in adeeciddu ay ku lug leedahay wadaagida ilaha jirka.
Bawlos wuxuu wax ka qoray ku-deeqidda si deeqsinimo ah iyadoo lala xiriirinayo dadaallada lagu yareynayo macaluusha. Laakiin isla mabaadii'da ayaa quseysa aruurinta maaliyadeed ee aan ku leenahay Kaniisadda maanta si aan u taageerno injiilka iyo wasaaradda Kaniisadda. Waxaan sii wadaynaa inaan taageerno shaqo muhiim ah. Waxay u oggolaaneysaa shaqaalaha wacdiya injiilka inay ku noolaadaan nolol ka timaadda injiilka sida ugu fiican ee aan awoodno.
Ilaahay wali wuu abaal mariyaa deeqsinimada. Wali waxay balanqaadeysaa khasnadaha jannada iyo farxad weligeed ah. Injiilku wuxuu wali dalabkayaga ku dalbanayay. Dhaqankeenna lacagta ayaa wali muujinaya sida aan u aaminsanahay waxa Ilaah sameynayo hadda iyo weligiis. Dadku weli way ku mahadnaqi doonaan oo ku ammaanaan doonaan Ilaah allabaryada aan maanta samayno.
Waxaan ka helnaa barakeysan lacagta aan siino kaniisadda - tabarucyadu waxay naga caawiyaan bixinta kirada qolka kulanka, daryeelka daaqsinta, daabacaadaha. Laakiin tabarucyadayadu waxay sidoo kale dadka kale ka caawiyaan inay siiyaan suugaanta dadka kale, si ay u bixiyaan meel ay dadku ku baran karaan beel rumaystayaal ah oo jecel dembilayaasha; in la bixiyo koox mu'miniin ah oo abuuraya oo dayactira jawi ay booqdeyaasha cusub lagu bari karo badbaadada.
Waad ogtahay dadkan Ma aha (wali), laakiin way kugu mahadsan doonaan - ama ugu yaraan Ilaah ugu mahadcelinayaan allabaryadaada nolosha. Runtii waa shaqo muhiim ah. Waxa ugu muhiimsan ee aan sameyn karno noloshaan ka dib markaan aqbalno Masiixa inuu yahay Bixiyahayagu waa inaan ka caawino Boqortooyada Ilaahay kobcin, isbedel sameyso adigoo u oggolaanaya Ilaah inuu ka shaqeeyo nolosheena.
Waxaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo ereyada Bawlos aayadaha 14-15: «Oo markay ducadooda kugu baryaan, way kuu xiisoodaan nimcada Ilaah ee wanaagsan ee kula jirta. Laakiin Ilaah ugu mahad naqa hadiyaddiisa aan la sheegi karin! »